Myanmar startups draw international investor interest | Invest Myanmar Summit 2019
၂၈ - ၂၉ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၉ • နေပြည်တော်၊ မြန်မာ
Myanmar startups draw international investor interest
1 ဒီဇငျဘာ 2018
ဈေးကွက်စွမ်းရည်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဈေးကွက်တွင်လာရောက်မြှုပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိသည်။ လတ်တလော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှာ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံများတို့မှဖြစ်ပြီး အခြားသောနိုင်ငံအမြောက်အများမှလည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိသည်။
19 မတျ 2019
26 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
22 ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2019
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှုံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများအား လေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားပါသလား? သင်သိရှိလိုသည်များကို ဖြေကြားပေးရန်အတွက်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.
*Only available to registered Summit participants.
Invest Myanmar Summit သည် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ဒေသတွင်းရှိ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ကို ပြသခွင့်ရရှိနိုင်မည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေနှင့် အနေအထားများကိုတင်ပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မြန်မာ့ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တစ်သားတည်းရှိနေသည်ကို လည်းတင်ပြနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စည်းကမ်းချက်များနှင့် အချက်အလက်မူဝါဒများ | ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာ မူဝါဒများ
အမှတ်-၂၉၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။ | ဖုန်း : ၉၅-၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ လိုင်းခွဲနံပါတ် : ၁၂၂၊၁၂၃ | အီးမေးလ်လိပ်စာ: umfcci@mptmail.net.mm, contact@investmyanmar2019.com |ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.umfcci.com.mm
Copyright © 2021 The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry. All rights reserved.